गृहनगरमा विमलेन्द्र निधिलाई धौधौ, पूरा गर्छन् त देउवालाई दिएको बाचा ? « Deshko News
गृहनगरमा विमलेन्द्र निधिलाई धौधौ, पूरा गर्छन् त देउवालाई दिएको बाचा ?
नेपाली काग्रेसका शिर्ष नेतृत्वहरु यती वेला चुनावी प्रचारका लागि मधेशमा छन् । सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितको टोली मधेशमा चुनावी प्रचारको क्रममा संचारमाध्यमहरुसंग प्रस्तुत हुदा एमालेप्रति आक्रामक देखिन्छ ।
सभापति देउवाका विश्वास पात्र नेताको रुपमा देखिएका विमलेन्द्र निधिले टिकक वितरणदेखि अन्य भूमिकामा हावी भएपछि अन्य पक्षका दुई नम्बरका नेता कार्यकर्ताले त्यसको खुलेरै विरोध गरेका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
तर निधिले पार्टीको दुई नम्बर भेलामा यस प्रदेशवाट कांंग्रेसले सय सिट जित्ने दावी गरेका थिए । चुनावी प्रचारका लागि धनुषामा रहदा दुई दिन अगाडि मात्र निधिले धनुषा सहित मधेशमा कांग्रेसप्रति जनलहर चलेको दावी गरेका थिए । उनले मधेशवाट एमाले बढारिने दावी समेत गरे । तर नेता निधिको गृहनगर रहेको धनुषाको नगराईन नगरपालिकामा कांग्रेस र एमाले विचमा मेयर पदका लागि कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।